Vaovao momba ny iPhone | IPhone News (Pejy 24)
"Hey Siri" dia kilemaina rehefa mametraka ny iPhone ao am-paosy
Nisy tatitra vao tsy ela izay nahita fa ny mpiara-miasa M9 miandraikitra ny "Hey Siri" dia tsy mandeha rehefa tafiditra ao anaty paosy ny iPhone.
Manatsara ny fahombiazan'ny iPhones taloha kokoa ve ny iOS 9.1?
Nandinika ny fahombiazan'ny iOS 9.1 amin'ny fitaovana iPhone taloha izahay ary nahagaga ny valiny. Mampiseho aminao ny fomba fiasan'ny iOS 9.1 izahay.
Ny tantaran'ny emoji manohitra ny fampijaliana nataon'i Apple ao amin'ny iOS 9.1
Ilay emoji iOS 9.1 miafina izay toa tsy misy dikany dia naseho ho fanentanana manohitra ny herisetra atao hoe #IAmAW saksi.
Ny Jailbreak dia mampiadana ny iPhone
Raha nanana fisalasalana ianao raha hampihena ny iPhone ny Jailbreak dia hanamafy izany ity horonantsary ity.
Rohy fampidinana IOS 9.1
Tanisao izay hahitanao ireo rohy fampidinana ho an'ny iOS 9.1
Waze 4.0 dia navaozina tamina vaovao tena mahaliana
Ny Waze 4.0 GPS Navigator dia nohavaozina miaraka amina rafitra interface vaovao ary ankehitriny koa mihinana bateria kely kokoa.
Nahazo vola 2,2 tapitrisa dolara ny sarimihetsika vaovao nataon'i Steve Jobs
Tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo, izay naseho ny sarimihetsika Jobs farany dia nitentina 1,5 tapitrisa dolara.
Apple dia manavao ny suite iWork ho an'ny iOS 9 sy 3D Touch
Apple dia nanapa-kevitra ny hanavao ny suite iWork iray manontolo mba hanolorana fanampiana ho an'ny fiasan'ny iOS 9 sy 3D Touch.
Apple dia mankasitraka mpanakana doka izay miasa amin'ny iOS 9 ary manakana ny atiny amin'ny fampiharana teratany.
Ny fampiharana dia mikendry ny hanakana ny doka tsy amin'ny rindranasa finday ihany, fa amin'ny fampiharana finday teratany ihany koa, ao anatin'izany ny Facebook ary na ny Apple News aza.
WhatsApp dia nohavaozina amin'ny zava-baovao tsy manam-paharoa sy tsy misy ilana azy
Ny rindranasan-kafatra hafatra WhatsApp dia nanavao ny fampiharana ho an'ny iOS manolotra ny mety hanamarihana hafatra toy ny kintana.
Philips dia manambara takela-kazo Hue vaovao sy mifanentana amin'ny HomeKit an'ny Apple.
Hue Bridge 2.0 dia afaka miara-miasa amin'ny Homekit an'i Apple, mamela ny jiro Hue rehetra misy fehezin'ny feon'ny Siri.
IPhone hanapaka azy rehetra, Crownstone sa ahoana ny fifehezana ny tranonao amin'ny finday avo lenta?
Miaraka amin'ny Crownstone ianao dia afaka manome fitaovana ny tranonao amin'ny faharanitan-tsaina ary mifehy ny tranonao amin'ny fiononan'ny findainao.
Ny Apple TV vaovao dia mamela fitaovana Bluetooth roa indray mandeha fotsiny.
Ny Apple TV vaovao dia tsy hanohana afa-tsy ny mpanara-maso Bluetooth roa indray mandeha sy telo, ao anatin'izany ny fanaraha-maso Apple TV, ho fitaovana tanteraka.
Manantena ny iPhone 'mora' ho an'ny 2016 ny mpandinika
Mbola misy mpandalina sasany mbola maditra amin'ny iPhone mora vidy na eo aza ny zava-nitranga tamin'ny iPhone 5c.
Misy OS X El Capitan izao: Ahoana ny fomba fampidinana sy fampifanarahana Mac
Rohy hampidinana ny OS X El Capitan
Google dia manolotra ny Nexus, Chromecast 2 ary Chromecast Audio vaovao
Google dia nanolotra ny Nexus 5X sy 6P, Chromecast 2 ary Chromecast Audio vaovao miaraka amin'ny takelaka vaovao antsoina hoe Pixel C.
Ireo fihetsika vaovao entin'ny iOS 9
Apple dia manolotra fihetsika vaovao isaky ny kinova amin'ny rafitra fiasany. Eto isika dia hanazava hoe inona ireo fihetsika vaovao nampidirina tao amin'ny iOS 9.
Ny taranaka faha-2 an'ny TouchID dia mamantatra ihany koa ny rantsan-tànana lena
Ny Touch ID an'ny taranaka faharoa vaovao dia tsy vitan'ny hoe haingana kokoa fa ho tsikaritra koa ireo rantsan-tanantsika somary mando.
Fampitahana haingana amin'ny iPhones rehetra [VIDEO]
Amin'ity horonantsary mahaliana ity dia ho azontsika atao ny mankasitraka ny tsy fitovizan'ny iPhone rehetra hatramin'ny nanombohany 8 taona lasa izay.
Ny iPhones vaovao dia maharitra hatramin'ny 1 ora anaty rano!
Ny iPhone 6s sy 6s Plus vaovao dia manatsara ny fanoherany ny rano amin'ny fomba mahatalanjona, anisan'ny mahatohitra tena mahery vaika nefa tsy voamarina amin'ny IPX
Hita ve ny 2GB an'ny RAM amin'ny iPhone 6s vaovao?
Asehonay aminao ny horonantsary iray ahitanao ny fahasamihafana misy eo amin'ny iPhone 6 Plus misy RAM 1 GB sy ilay iPhone 6s Plus vaovao misy RAM 2 GB
Netflix ho an'ny iOS dia nohavaozina mamela ny fividianana ny famandrihana amin'ny alàlan'ny fampiharana
Manavao ny fampiharana azy ny Netflix hahafahantsika mividy ny famandrihana serivisy mivantana avy amin'ny app an'ny orinasa.
Mipoitra any China ny fivarotana Apple sandoka alohan'ny fanombohana ofisialy iPhone 6s
Feno fivarotana hosoka i Shina mody Apple Stores ary mivarotra ny iPhone 6s vaovao, fitaovana izay lasa klone Android sandoka.
Efa manana ny fitsapana fanoherana voalohany an'ny iPhone 6s sy 6s Plus vaovao isika
Efa manana ny fitsapana fanoherana voalohany momba ny iPhone 6s sy 6s Plus vaovao isika, tsy misy isalasalana fa manaporofo izy ireo fa mahatohitra kokoa noho ny teo aloha.
Pebble dia mandefa famantaranandro vaovao miaraka amina endrika boribory: Pebble Time Round
Pebble dia mandefa ny Pebble Time Round
Ny mpivarotra dia lavanty amin'ny AppleTV 4 -ny amin'ny eBay, manararaotra kofehy ara-dalàna
Manararaotra kofehy ao amin'ny klazy Apple ny mpamorona iray mba hamerenany indray ny AppleTV 4 (azo talohan'ny namarotana azy) tao amin'ny eBay ho an'ny tarehimarika tsara.
Ny sary mivantana amin'ny iPhone 6s dia misy bibikely izay efa amboarin'i Apple
Apple dia miaiky ny bibikely amin'ny Live Photos izay hamboariny amin'ny alàlan'ny fanavaozana lozisialy
Efa mivoaka izao ny WatchOS 2. Ahoana ny fametrahana azy amin'ny Apple Watch
Ahoana ny fomba fampidinana sy fametrahana WatchOS 2 amin'ny Apple Watch
Manampy amin'ny famonjena ny ain'ny tanora ny Apple Watch
Ny Apple Watch dia manampy amin'ny famonjena ny ain'ny zatovo iray izay mety nifarana tampoka sy nampalahelo.
Misy ny fiaran'i Apple ary ireo no fitsapana rehetra hatrizay
Apple dia miomana ny hanomboka ny fitsapana ny fiarany amin'ny araben'i Kalifornia
Handray iOS 9 amin'ny alàlan'ny OTA ve aho raha manana kinova beta na GM napetraka?
Raha nametraka ny kinova samihafa amin'ny iOS 9 natombok'i Apple tamin'ny volana Jona ianao izao, amin'ny iPad News dia lazainay aminao ny fanavaozana ny fitaovanao.
Apple TV dia hamela anao hisintona lalao maherin'ny 200 MB
Ny vaovao milaza ny fetran'ny 200MB ho an'ny lalao amin'ny Apple TV dia nodiovina ihany tamin'ny farany: afaka mametraka lalao amin'ny fetra 2,2GB isika.
Raha mikasa ny handraikitra ao amin'ny 4K ianao dia hadinoy ireo iPhone 6GB 16GB
Ny maodely fampidirana iPhone dia mazava fa tsy ampy amin'ny fandraisam-peo 4K, holazainay aminao hoe ohatrinona ny horonantsary fandraisam-peo 4K mipetraka amin'ny iPhone.
Torolàlana amin'ny fampiasana iPhone ho modem PC
Fampianarana hizarana ny Internet amin'ny alàlan'ny iPhone ho router. Jereo ny fomba fitetezana mampiasa ny fifandraisanay finday noho ny tethering.
Ny iPhone 6s vaovao dia misy microphone 2 eo ambany
Hitanay ny zava-baovao iray tsy notantarain'i Apple, ny iPhone 6s vaovao dia misy mikrô 2 ao ambany, ho hitantsika ve ny mahasoa an'ilay faharoa?
Nanamafy i Apple fa manana bateria kely kokoa ny iPhone 6S
Ny bateria iPhone 6S dia nahena ho 1715 mAh, efa ho 100 mAh latsaky ny teo alohany, ny bateria iPhone 6.
Farany ny Apple TV vaovao dia tsy manohana 4K
Ary farany, na eo aza ny firaketana iPhones vaovao ao amin'ny 4K, ny fitaovana Apple TV dia tsy milalao an'ity karazana atiny ity, farafaharatsiny amin'izao fotoana izao
Ekipa Nintendo sy Niantic hamoaka Pokémon GO
Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny tranofiara ho an'ny Pokémon GO, ny filokana vaovao an'i Nintendo hitondra an'izao tontolo izao miaraka amin'i Niantic ho an'ny finday avo lenta.
Ny niandohan'i Apple an'ny Apple
Hodinihintsika ny tantaram-piainan'ny Syriana an'ny mpanorina ny Apple Steve Jobs, fiaviana Syriana iray izay tokony hamporisika antsika hieritreritra ilay tantara momba ny maha-olombelona maha-olona Syriana.
Tsaho vaovao momba ny iPhone 6s! IPhones vaovao rahampitso dia mety handray fanapahan-kevitra lehibe amin'ny famahana
Tsaho vaovao avy amin'ny Weibo dia manome toky fa ny iPhone 6s sy 6s Plus vaovao dia hahita ny fivoaran'ny efijery ho lasa FullHD sy 2K tsirairay avy.
Phillips dia mandefa Hue Lightstrip Plus mazava kokoa
Phillips dia mandefa Hue Lightstrips Plus vaovao hanatsarana ny fahafahan'ny rafi-jiro manazava azy.
Ny iPhone 7 no iPhone manify indrindra amin'ny tantara, mitovy amin'ny iPod Touch 6G & iPad Air 2
Tsaho vaovao avy amin'ny loharanom-baovao marim-pototra dia manome toky fa ny iPhone 7 dia efa noforonina ho an'ny 2016 ary izy io no ho iPhone manify indrindra amin'ny tantara.
Apple dia hiverina avy amin'ny tontonana ao anaty sela mankany Glass ka hatramin'ny Glass amin'ny 2016
Apple dia mikasa ny hiverina amin'ny haitao fampiroboroboana On-Cell teo aloha hanatsarana ny famahana sy ny velaran'ny faritra aseho azy ho mazava kokoa.
PayPal mandefa fomba vaovao handefasana vola eo amin'ny namana
PayPal dia nanangana endrika fandoavam-bola vaovao handefasana vola amin'ireo namantsika nefa tsy mandoa kaomisiona
Ny fampiharana GoPro dia nohavaozina mba hampiditra editor video
GoPro manavao ny fampiharana fanaraha-maso fakan-tsary hahafahanay manova ireo horonantsary noraketinay avy amin'ilay fampiharana ihany.
Apple nifampiraharaha tamin'ny orinasa mpamokatra ny sarany isam-bolana ho an'ny Apple TV
Apple dia mifampiraharaha amin'ireo orinasa mpamokatra momba ny vidin'ny famandrihana isam-bolana amin'ny serivisy fahitalavitra an-tserasera vaovao, izay hatolony amin'ny 9th
Apple dia hanambara andian-vokatra efa lany andro
Apple dia hanambara fa lany andro ireo vokatra ao amin'ilay lisitra asehonay anao amin'ny 8 septambra, andro iray mialoha ny fehezanteny amin'ny iPhone 6s sy Apple TV 4.
Samsung dia manome 200 $ anao raha miala amin'i Apple ianao
Ny paikadin'ny dokambarotra farany an'ny Samsung dia manome anao hatramin'ny $ 200 raha manapa-kevitra ny hanakalo ny paoma ho an'ny Samsung Galaxy ianao.
Ny lesoka famolavolana mampatahotra an'ny Samsung Galaxy Note 5
"Pengate" no nantsoina hoe lesoka famolavolana goavambe izay mahatonga ny Galaxy Note V tsy misy ilana azy raha atsofokao ambany ny S-Pen.
Apple dia mety manakarama "YouTubers" malaza hiasa amin'ny dokam-barotra
Ny orinasa dia mety manakarama YouTubers malaza amin'ny fampielezana doka ho avy.
iMods, ny solon'ny Cydia, akaiky kokoa hatrany
Ny safidy hafa amin'ny Cydia, iMods, dia efa eo amin'ny dingana farany ary tsy ho ela dia afaka mankafy ilay magazay fangatahana vaovao te hisolo an'i Cydia izahay
Flaws ao amin'ny kinova volondavenona an'ny Apple Watch Sport
Ny maodely volondavenona an'ny Apple Watch Sport dia iharan'ny fahasimbana amin'ny sary famantarana Apple ao aoriany. Apple dia mahazo fitarainana
WhatsApp Web ho an'ny iPhone izao no azon'ny mpampiasa rehetra
Tao anatin'ny ora vitsivitsy dia hanavao ny fampiharana azy ny WhatsApp ary afaka mampiasa tranonkala WhatsApp avy amin'ny solosaina ihany ny mpampiasa iOS amin'ny farany
iOS 9 dia mamela anao handahatra ny fanavaozana ny OTA amin'ny alina
Ny kinova vaovao an'ny rafi-piasan'ny finday an'ny Apple dia ahafahanao mandahatra fanavaozana ny OTA isan-alina mba hamonjy anao ny fiandrasana.
Apple manavao ny rindrambaiko iPod nano
Apple manavao ny kinova vaovao an'ny rindrambaiko iPod nano hanohanana ny serivisy Apple Music.
Samsung Gear S2, kopia farany avy amin'ny Samsung mankany Apple
Ilay famantaranandro vaovao avy amin'ny orinasa Koreana dia manana fitoviana lehibe amin'ny Apple Watch raha ny momba ny interface amin'ny mpampiasa.
Ampianarinay anao ny fomba fampidinana ireo sarintany amin'ny iPhone miaraka amin'ny Here Maps avy amin'ny Nokia, ka hanana sarintany ivelan'ny Internet ianao raha tsy misy fifandraisana data na 3G.
Google for iOS dia nohavaozina amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny lahasa Ok Google
Google dia manavao ny fampiharana ny motera fikarohana azy hanatsara ny asan'ny mpanampy Ok Google.
Amin'ity taona ity dia misy iPhone 6c azo aseho miaraka amin'ny iPhone 6s sy iPhone 6s Plus
Araka ny filazan'ny evleaks, amin'ity taona ity dia misy iPhone 6c aseho eo anilan'ny iPhone 6s Plus sy ny iPhone 6s. Tsaroanay fa namoaka fitaovana maro ny evleaks
Raha tsy iPhone dia tsy iPhone, fanambarana paoma vaovao, fampandrenesana sary an-tsary
Google Maps ho an'ny iOS dia manolotra fomba vaovao amin'ny alina
Google Maps for iOS dia manolotra fomba vaovao amin'ny alalàn'ny rafitra fitetezana GPS hahafahantsika mampiasa ny fampiharana amin'ny fomba milamina kokoa
Ity no hevitray momba ny iOS 9 Beta 5
Manao fanadihadihana fohy momba ny vaovaon'ny iOS 9 izahay ary hevitra momba izay tokony ho iOS 9 ary tsy noho ny toerana misy anay.
Nahazo fanavaozana lehibe ny WhatsApp, ireo no vaovao
Ny fampiharana fandefasan-kafatra mailaka fanta-daza dia vao avy nandalo ny iray amin'ireo fanavaozana lehibe indrindra fantany, ireo no vaovao.
Worms 4, ho avy tsy ho ela amin'ny AppStore
Ny ekipa 17 dia mandefa ny fizarana fahefatra amin'ny saga mpiady kankana, Worms 4, ao amin'ny AppStore ho an'ireo nostalgia sy mpiady indrindra hankafizana.
Rehefa velona ny iPhone 6 Plus 54 andro ambanin'ny ranomasina
Iza no nahafantatra fa ny iPhone dia afaka haharitra ela toy izany any amin'ny lalina? Na ny tompony aza tsy natoky tena hahita azy intsony.
Fa maninona i Apple no tsy mamela ny sisiny amin'ny iOS?
Herintaona taorian'ny nahitana ny sisiny ho toy ny emoticon, dia mbola tsy misy izy ankehitriny ary toa tsy ho ela izany.
Ny maodely Volkswagen 2016 dia hanasongadina ny CarPlay
Volkswagen dia manamafy fa ny Golf R sy Tiguan 2016 dia hampiditra ny fanohanan'ny CarPlay amin'ny fiarany.
Windows 10, rafitra fiasa vaovao an'ny Microsoft
Manomboka androany dia ofisialy ny Windows 10 ary amin'ity lahatsoratra ity izahay dia milaza aminao zavatra maro momba ny rafitra fiasa Microsoft vaovao.
Nintendo miditra an-tsokosoko ao amin'ny AppStore
Balloon Fight, kilasika Nintendo, dia miditra ao amin'ny AppStore amin'ny endrika fampiharana novolavolain'ny antoko fahatelo, maimaimpoana ary tsy misy doka.
Ahoana ny fomba hanampiana lahatsoratra amin'ny Pocket taorian'ny fanavaozana farany ny Twitter
Manome tsipiriany izahay, tsikelikely, ny fomba fampidirana rohy mankany amin'i Pocket miaraka amin'ireo fitaovana Twitter vaovao
Omaly ny iPod Touch 6G vaovao, kinova nohatsaraina indrindra amin'ny fitaovana fampidirana iOS an'ny Apple, dia navoaka am-pahanginana.
'Raha tsy iPhone dia tsy iPhone', fanentanana vaovao nataon'i Apple
Apple dia nanangana ny doka ho an'ny doka iPhone vaovao mitondra ny lohateny hoe: "Raha tsy iPhone dia tsy iPhone"
iTunes Match dia hahafahantsika mitahiry hira 100.000 XNUMX ary ho tafiditra ao amin'ny Apple Music
Ireo mpampiasa Apple Music dia hahazo iTunes Match fa tsy andoavany vidiny
Facebook Messenger dia azo ampiasaina izao raha tsy manana kaonty Facebook
Vao namoaka fanavaozana vaovao ny Facebook Messenger izay ahafahanao mampiasa ny rindranasa Messenger nefa tsy mila manana kaonty Facebook, miaraka amin'ny nomeraon-telefaonao fotsiny.
WhatsApp sy ny fomba fanondranana olona an-tsokosoko amin'ny angon-drakitra tsy miankina aminay
Nesorin'izy ireo indray ny loko WhatsApp avy amin'ny resaka tsiambaratelo sy fiarovana data. Izany no fomba fifamoivoizan'izy ireo amin'ny angona anay avy amin'ny WhatsApp Inc.
Taylor Swift tsy faly amin'ny Apple Music's 3 volana maimaim-poana
Tsy tian'i Taylor Swift ny hevitra hoe tsy handoa onitra mandritra ny fotoam-pitsarana telo volana an'ny Apple Music.
Miaraka amin'ny Mail ao amin'ny iOS 9 dia afaka manokatra sy mitahiry karazana rakitra hafa isika
Misaotra ny iOS 9 betas fa hitantsika fa manana fampiasa vaovao ny rindranasa Mail toy ny mety hametahana ireo vaovao avy amin'ny iCloud Drive
Ny multitasking nandrasana nandrasana nandritry ny iOS 9 ho an'ny iPad, amin'ny antsipiriany
Apple dia nanolotra ny multitasking vaovao an'ny iOS 9 izay mizara ho rafitra telo: Split View, sary amin'ny sary ary Slide Over
Ahoana ny fomba hanarahana ny fehezanteny WWDC 2015 amin'ny OS X, iOS, Windows, Android, Linux ary Apple TV.
Asehonay aminao ny fomba hanarahana ny fehezanteny WWDC 2015 amin'ny solosaina misy Windows, Linux na misy fitaovana Android.
Hitsahatra tsy hamela ny fampifandraisana sy ny fandefasana mailaka amin'ny fitaovana iOS taloha intsony i Yahoo
Vao avy nanambara i Yahoo fa hijanona tsy hanompo ireo fitaovana iOS taloha intsony izy hanohizany hanolotra serivisy mailaka azo antoka toy ny teo aloha.
Fitaovana mifanentana amin'ny HomeKit voalohany
Apple dia nanavao ny tranokala izay misy fampahalalana momba ny HomeKit manampy ireo fitaovana mifanentana voalohany.
Mandra-pahoviana ny mpampitohy ny Tselatra?
Antony mahatonga an'i Apple hitsahatra tsy hampiasa ilay mpampifandray Tselatra amin'ny iPhone sy iPad hialana amin'ny USB-C vaovao efa misy ao amin'ny MacBook 2015.
Apple dia handoa bebe kokoa amin'ny programa fanodinana azy ho an'ny iPhone 4S / 5 / 5s
Ny loharanom-baovao avy amin'ny American Apple Store dia manome toky fa handoa bebe kokoa amin'ny fandaharana fanodinana azy i Apple raha miala amin'ny iPhone 4S, iPhone 5 na iPhone 5s isika.
Apple no orinasa sarobidy indrindra eto an-tany
Apple dia niverina teo an-tampon'ny lisitr'ireo orinasa sarobidy indrindra eto an-tany, nanongana an'i Google, izay tamin'ny taona lasa no nibodo ny laharana voalohany.
Apple dia namoaka antontan-taratasy fanohanana manome anay patch vonjimaika amin'ilay olana manakana ny fisokafan'ny iMessage aorian'ny nahazoana hafatra
WhatsMac, mpanjifa WhatsApp amin'ny Mac anao
Androany dia holazainay aminao ny fomba fampidinana ny mpanjifanao WhatsApp ho an'ny Mac anao ary hahafahanao mankafy ny resaka WhatsApp tianao indrindra.
Playboy mandefa ny fampiharana ofisialy ho an'ny fitaovana iOS
Lahatsoratra mahaliana izay ahafantarantsika fa ny magazine Playboy dia efa misy ny fampiharana azy ho an'ny fitaovana iOS.
Apple dia mampiakatra ny vidiny any Canada sy Europe
Noho ny fiorenan'ny dolara amerikana, nampiakatra ny vidin'ny solosainany any Canada sy any amin'ny firenena eropeana sasany (eo anelanelan'ny 150 sy 600 euro) i Apple.
Ekipa Starbucks miaraka amin'i Spotify hanolotra mozika sy kafe
Starbucks sy Spotify dia hanolotra fampifangaroana eo amin'ny serivisy sy ny valisoa amin'ny tsy fivadihana amin'ny fihainoana mozika sy fisotroana kafe.
Greenpeace dia nidera an'i Apple noho ny politikany maitso
Ireo ao Cupertino koa dia laharana voalohany amin'ny paikady maharitra, Greenpeace nidera an'i Apple noho ny asany maitso.
Inona ny fiantohana marina an'ny Apple Watch?
Apple dia nanomana tatitra kely miaraka amin'ireo trangan-javatra izay rakotry ny fiantohana Apple Watch ary iza amin'ireo no tsy afaka amboariny
Nanapa-kevitra ny hampiato ny fanohanany YouTube amin'ny fitaovana sasany i Google
Ny fanovana API dia midika fa ireo iPhone taloha, iPods, iPads ary Apple TV no ho voakasik'izany ary tsy afaka miditra amin'ny horonantsary YouTube intsony.
Ny clone Super Mario dia mamely ny App Store ho Super Bros!
Ny mpamorona Kostas Papadakis dia namoaka ny kinova mampiavaka ny lalao video mahazatra Super Mario, ao anatin'ny tontolon'ny Game Boy.
Ny Apple Watch koa dia mizara ny fitempon'ny fon'ny zaza vao teraka
Mpampiasa Apple Watch iray dia mampiseho ny fomba fampiasany azy hizarana ny tahan'ny fony vao teraka tamin'ny fianakaviany.
Apple dia namoaka ny iOS 8.4 beta 2 ho an'ny mpamorona sy beta 1 ampahibemaso.
Apple dia namoaka ny beta faharoa an'ny iOS 8.4, miaraka amin'ny build 12H4086d. Tsaroanay fa ny zava-baovao farany an'ny iOS 8.4 dia ...
Apple Watch dia mampiditra oximeter, fa tsy ampandehanana
Ny Apple Watch dia manana oximeter ao anatiny izay ahafahanao mifehy ny habetsan'ny oxygen ao amin'ny ranao, saingy mandritra ny fotoana fohy dia tapaka izy io.
Apple dia nanangana fanambarana Apple Watch vaovao telo
YouTube dia efa nampiantrano ireo horonantsary vaovao telo an'ny paoma lehibe hanambara ny famantaranandrony: Apple Watch antsoina hoe Up, Us and Rise
Fitsapana voalohany momba ny fanoherana ny rano an'ny Apple Watch
Ny fitsapana fanoherana ny rano voalohany an'ny Apple Watch dia tonga avy any Aostralia
Curiosities of iOS izay tsy fantatrao: inona no nafenin'ny sary famantarana ny feo?
Ny sary famantarana ny feon'ny iOS dia manafina fahalianana mahaliana iray izay tsy voamariky intsony hatramin'izao.
Miseho amin'ny Google Maps ny logo Android amin'ny uriny ao amin'i Apple
Miseho ao amin'ny Google Maps ny sary famantarana Android amin'ny alàlan'ny fiatoana amin'ny logo Apple, sary mampiady hevitra izay misy fiatraikany amin'ny mpampiasa Android sy iOS.
'Fidirana haingana', iray amin'ireo hevitra voalohany amin'ny iOS 9
WWDC 2015 efa manakaiky ary ny hevitra voalohany dia tonga amin'ny Internet, amin'ity fiheverana voalohany an'ny iOS 9 ity dia mahita efijery hidin-trano mizara telo isika
Apple Watch maharitra ela kokoa noho ny iPhone vao ho velona
Demo maromaro natao tao amin'ny magazay Apple dia mampiseho fa maharitra ela ny Apple Watch
Ady vorona tezitra! ny lalao miady Angry Birds
Rovio dia manambara ny fahatongavan'ny Angry Birds Fight!, Lalao ady vaovao miaraka amin'ireo vorona kely malaza an'ny orinasa ho mpilalao fototra.
Fitsapana ny tanjaky ny kristaly safira Apple Watch
Ireo tovolahy ao amin'ny iPhonefixed dia nanandrana ny fanoherana ny kristaly safira an'ny Apple Watch and Apple Watch Edition
[VAHAOLANA] Ny fividianana amin'ny Touch ID ao amin'ny App Store dia mijanona tsy miasa amin'ny iOS 8.3
Aorian'ny fanavaozana ny iOS 8.3 dia misy mpampiasa maro izay tsy afaka mampiasa ny safidy hividy amin'ny Touch ID intsony. Andrasana tsy ho ela ny fanavaozana.
Apple koa dia manavao ny Apple TV amin'ny kinova 7.2
Ny Apple TV dia havaozina ihany koa mahatratra ny kinova 7.2 manatsara ny fahamarinan-toerana sy ny asany.
Ny iPhone manaraka dia hatao hoe iPhone 7
Ny iPhone manaraka, antenaina ho tonga amin'ny volana septambra, dia azo antsoina hoe iPhone 7 fa tsy iPhone 6s noho ny vaovao momba ny fitaovana ilaina.
Mamorona tantara tsara tarehy miaraka amin'ny Adobe Slate
Adobe mandefa Adobe Slate, fampiharana vaovao ahafahana mamorona endrika tsara, maimaimpoana ho an'ny iPad.
Gaga! Ny Samsung Galaxy S6 Edge koa dia avo roa heny [video]
Amin'ity horonantsary ity dia hitantsika fa ny fanoherana ny finday avo lenta Samsung vaovao dia mitovy amin'ny an'ny iPhone 6, mitazona na dia kely aza.
Ity no fomba filalaovanay Super Mario 64 amin'ny iOS
Ny sarin'ny lalao Super Mario 64 mandeha amin'ny fitaovana iOS, indrindra amin'ny iPhone 6, dia voasivana.
Ny gazety Fortune dia namoaka, araka ny filazan'izy ireo, fa i Tim Cook no mpitondra tsara indrindra manerantany amin'ny sehatry ny asa.
Flightradar24 dia niainga tao amin'ny App Store taorian'ny loza mahatsiravina nataon'ny Germanwings
Sehatra Flightradar24 dia manolotra fanaraha-maso fiaramanidina tena izy manokana
Pioneer dia mandefa mpanara-maso vaovao miaraka amin'ny mifanentana amin'ny CarPlay
Tim Cook: "Ny zavatra rehetra dia afaka miova afa-tsy ny sanda"
Ny CEO CEO Apple Tim Cook dia nanao resadresaka tamin'ny gazety Fast Company. Tao anatin'izany no niresahany olana maro ankehitriny.
Apple dia manomboka manafoana ny antivirus izay ao amin'ny App Store
Apple dia manala ny antivirus ao amin'ny App Store mba hisorohana ny fanararaotana amin'ny fampiharana izay mampanantena ny hanafoana ny malware amin'ny iPhone na iPad, zavatra iray tsy azo atao.
Pebble hampiasa vola $ XNUMX tapitrisa amin'ny kojakoja ho an'ny Pebble Time
Pebble dia hampiasa vola ho azy hanentanana ny fanamboarana kojakoja ho an'ny Pebble Time
Izany no mety ho endrik'ilay iPhone 6S amin'ny famaranana volamena rose
Fiheverana ny ho endrik'ilay iPhone 6S amin'ny famaranana mavokely
Ataovy pirinty ny tadinao Apple Watch
Noho ny fanontana 3D dia afaka manonta ny tadin-tsika manokana ho an'ny Apple Watch izahay
ETO Sarintany, ny Nokia GPS miakatra avy amin'ny lavenony
Nokia dia mamerina ny rindrambaiko GPS HERE Maps hiverina amin'ny iPhones
Safari dia manana bibikely taorian'ny fanavaozana ny iOS 8.2
Apple dia namoaka fanavaozana rindrambaiko ho an'ny Apple TV
Toy ny isam-bolana, ity ny horonantsary drone amin'ny fananganana Apple Campus 2
Lahatsary vaovao dia mampiseho amintsika, indray mipi-maso, ny fandrosoan'ny fananganana ity tranobe lehibe ity.
Ny toetra ara-teknikan'ny Apple Watch
Mampiseho ireo toetra teknika miavaka indrindra amin'ny Apple Watch izahay, izay haseho amin'ny fomba ofisialy ny Alatsinainy 9 martsa ho avy izao
Apple dia mitarika ny fametrahana ny vokatra amin'ny sarimihetsika sy fahitalavitra
Brand Channel dia manamafy fa mitarika Product Placed amin'ny sarimihetsika sy fahitalavitra i Apple, fanatrehana hitantsika teo amin'ny boaty 50 Shades of Grey.
Fanavaozana WhatsApp fohy
Amin'ny faran'ny andro anio dia hitantsika fa tsy misy fampandrenesana mialoha miaraka amin'ny fanavaozana WhatsApp fohy sy vaovao.
Microsoft mandefa fitendry Bluetooth azo aforitra mifanaraka amin'ny iOS
Vao namoaka keyboard vaovao i Microsoft izay aforitra ary mifanentana amin'ireo fitaovana misy amin'ny Bluetooth 4.0
IKEA hivarotra latabatra sy jiro miaraka amin'ny charger tsy misy tariby anatiny
Lahatsoratra izay ahalalantsika ny vaovao fa hivarotra latabatra sy jiro amin'ny charger tsy misy tariby ao anaty IKEA.
Mipoaka ny iPhone ao am-paosin'ny mpampiasa ka may ny fahaizany
Nisy iPhone nipoaka tao am-paosin'ny pataloha lehilahy Long Island, ka nahatonga ny dindon'ny diplaoma faharoa sy fahatelo ny tongony.
iOS 8.3 dia hitondra emoji vaovao amin'ny fitaovantsika
iOS 8.3 dia hitondra emojis vaovao ho fanampin'ny mety hanovana ny lokon'ny hoditra na ny hazakazaky ny tsirairay amin'ny fotoana anoratana.
Ity no voalaza fa sabatra laser tadiavin'i Apple amin'ny Star Wars
Amin'ny fotoana hamoahana ny sarimihetsika Star Wars vaovao, dia mivoaka ny famoahana ny Apple lightsaber (noforonina), ny iSaber.
iTunes dia efa manana ampahan'ny sarimihetsika Disney misy vidiny manokana
iTunes dia efa manana ny fizarana sarimihetsika Disney azy manokana izay nanokatra ny varavarany tamin'ny vidiny manokana mandritra ny fotoana voafetra.
Ny fehiloha fitbit dia miteraka fahasosorana amin'ny hoditra
Fitbit Charge, Charge HR, ary Surge wristband indray dia miteraka fahasosorana amin'ny hoditra na alikaola ho an'ny mpampiasa sasany aorian'ny fampiasana ora maro.
Ireo mpitatitra amerikana dia tsy maintsy mamoaka ny iPhone manomboka anio
Ny mpandraharaha any Etazonia dia voatery mamoaka ny iPhone na telefaona finday hafa raha vantany vao vita ny fifanarahana na ny fandoavana ny finday avo lenta.
Ny iPhone dia mirakitra ny hetsika ataontsika ho marimarina kokoa noho ny wristband
Ireo fehin-tanana na fehin-tànana fanaovana hetsika dia mirakitra ny asantsika isan'andro, na izany aza, ny iPhone 6 dia afaka mahazo angon-drakitra marina kokoa.
Inona no antenaina amin'ny iOS 9?
Ny fanangonana tsaho, fanangonan-tsonia iraisana ary fanangonan-tsonia manokana natokana ho an'ny iOS 9, ny rafitra fandidiana finday manaraka avy any Apple.
Apple dia manaparitaka tselatra LED ivelany ho an'ny iPhone, zavatra hanatsara ny sary nalaina tamin'ny alina na tamin'ny tarehin-jiro ratsy.
Ny fampiharana Tinder dia manomboka mampiditra fitaovana fandoavambola
Ny mpamorona Tinder dia mampiasa safidy vaovao roa izay mitentina $ 2,99 isam-bolana
Ny iPhone dia hamela antsika hanokatra ny fiara, araka ny patanty Apple farany
Ny patanty iray dia manambara ny fikasan'i Apple hampiasa ny iPhone miaraka amin'ny lakilen'ny fiara
Raha mpankafy sary an-tsary ianao ary bebe kokoa raha avy any Apple izy ireo, ireto ny rohy fampidinana ireo sary sokitra OS X Yosemite
TouchID azo fitahina
Ekipa misy olona 2 mahavita mamitaka ny sensor TouchID an'i Apple sy ny iPhone 5s, 6 ary 6 Plus ao anatin'ny 15 minitra fotsiny nefa tsy mandany vola be.
SoundCloud nanova tanteraka ny fampiharana iPad azy
SoundCloud dia namoaka fanavaozana vaovao ho an'ny fampiharana azy, izay misy ny fanavaozana tanteraka ny fampiharana iPad.
Ny Real Racing 3 dia havaozina amin'ny fiara sy fitsapana vaovao
Real Racing 3 dia nohavaozina miaraka amin'ny fiara sy ny ambaratonga vaovao hankalazana ny fanombohana ny lalao roa taona lasa izay.
Apple nanampy tanàna 11 hafa ho an'i Flyover amin'ny sari-taniny
Apple manatsara ny sarintany amin'ny alàlan'ny fanampiana tanàna vaovao 11 amin'ny maodely Flyover telo refy izay ahafahanao mizaha ireo toerana fizahan-tany lehibe.
Uber hametra ny fiakaran'ny vidim-piainana mandritra ny tafiotra mahery any New York
Uber dia tsy hampihatra ny fiakaran'ny vidim-piainana mahazatra alohan'ny oram-panala manakaiky an'i New York
"Maimaimpoana amin'ny iTunes" na ilay faritra omen'i Apple hira na andiany
Lahatsoratra izay ahalalantsika ny "Maimaimpoana amin'ny iTunes" na izay mitovy, ilay fizarana izay omen'i Apple hira na andian-tantara.
Amin'ny magazay mitahiry vola sy tsena an-tserasera dia tsy sarotra ny milatsaka amin'ny hosoka. Aorian'ny fivarotana prototype Apple sandoka, dia dinihinay raha azo atao ny manalavitra azy ireo.
Ireo mpampiasa IPhone dia lany amin'ny mpanjifa tranonkala WhatsApp
Ny fampiasana ny mpanjifan'ny tranonkala WhatsApp amin'ny iPhone dia tsy azo atao noho ny fetra iOS izay tsy vitan'ireo mpamorona.
Ny zava-baovao ateraky ny Windows 10
Vao nanolotra ny Windows 10 i Microsoft, miaraka amin'ny vaovao sy fitoviana lehibe amin'ny OS X an'i Apple
Pencil, amidy ankehitriny ao amin'ny magazay an-tserasera Apple
Pencil no pensilihazo ho an'ny iPad navoakan'ny orinasa FiftyThree, tompon'ny application Paper ho an'ny famolavolana sy ny sary.
Mampiasa WhatsApp Plus ve ianao? Ka mety hanakana anao ny WhatsApp
Ny WhatsApp dia manakana ireo mpampiasa izay manana WhatsApp Plus nametraka amin'ny findainy Android na iPhone, manakana ny fidirana amin'ny mpanjifa fandefasana hafatra eo noho eo.
PlayBox dia rindranasa vaovao ho an'ny iOS sy Android izay ahafahanao mijery horonantsary streaming and series tsy misy Jailbreak.
Facebook Messenger dia mamela anao hitahiry sary sy horonan-tsary amin'ny roul
Ny Facebook Messenger dia mamela antsika hitahiry rakitra multimedia alefa any aminay ao anaty kodiarana.
Tennis Channel Everywhere tonga amin'ny Apple TV
Mitohy ny fanavaozana sy fanavaozana ny sehatra atiny Apple TV. Ho an'ireo tonga amin'ny fantsona maro samihafa tamin'ny herinandro lasa, ity vaovao ity
TextBlade ny fitendry ultra-portable ho an'ny iPhone sy iPad
Textblade no keyboard vaovao ultra-portable izay mikendry ny hanana toerana eo amin'ny tsena.
Ny tombony amin'ny fampiasan'ny antoko fahatelo ny seranan-jiro
Ny fanokafana ny fampiasana ny seranan-tsambon'i Apple ho an'ny ankolafy fahatelo dia manome tombony betsaka, na ho an'ny mpampiasa na ho an'ny mpanamboatra.
Fahita matetika amin'ny mpampiasa ny fijerena sary vetaveta amin'ny iPhone
Ny fijerena sary vetaveta amin'ny iPhone dia fahita matetika amin'ny fijerena horonantsary avy amin'ireo tranonkala pôrnôgrafia lehibe izay manolotra ny atiny ampifanarahana amin'ny iPhone sy iPad.
Miresaka momba ny fanapahana hack amin'ny iOS sy Android ny mpamorona Monument Valley
Ny angona momba ny piraty amin'ny app amin'ny iOS sy Android dia manambara fa ny 40% ihany no aloa amin'ny Monument Valley amin'ny iPhone ary 5% ihany no aloa amin'ny Android
Resadresaka momba ny mpamorona TaiG
Ny andro iray hafa dia nadinadinina izy ireo tamin'ny XN, mpamorona ny TaiG, ary novaliany tamin'ny fanambarana izay nanambara tsiambaratelo maro momba izay noheverinay
Inona avy ireo rindranasa finday be mpampiasa indrindra tamin'ny 2014?
Jereo ny rindranasa ho an'ny iOS sy Android izay efa be mpampiasa indrindra tamin'ny 2014, ny sivy amin'izy ireo noforonin'i Google na Facebook.
MoneyWiz 2, tantano ny kaontinao ary ampitombo ny tahirinao
Raha toa ka mitahiry vola bebe kokoa ao anatin'ny tanjonao ary te ho tompon'andraikitra bebe kokoa sy mavitrika ianao amin'ny fitantanana ny fandanianao, ny fangatahanao, tsy isalasalana, dia MoneyWiz 2
Jereo hoe inona avy ny vaovao amin'ny Apple amin'ny 2015 ary inona ireo vokatra vaovao izay havoaka mandritra ity taona ity.
Fa maninona no najanon'i Apple ny fanomezana freebies 12 andro?
Voamarina fa tsy hisy fanomezana 12 andro amin'ny 2014 aorian'ny fampiatoan'ny Apple ny fanolorana izany amin'ny iTunes.
Fa maninona i Apple na Beats no anisan'ny marika tian'ny mpianatra eny amin'ny oniversite?
Hodinihinay izay lakilen'ny fahombiazan'ny marika lehibe toy ny Apple na Beats, ireo tian'ny tanora.
Pegatron hanadihady ireo fitarainana avy amin'ny fanadihadiana fanadihadiana nataon'ny BBC
Ny fanadihadiana ao amin'ny BBC momba ny ozinina mpamatsy an'i Apple dia manome betsaka horesahina, ankehitriny dia nilaza i Pegatron fa handinika ireo fotodrafitrasa ireo.
Izany no mitranga raha mahandro ny iPhone 6 ao amin'ny Coca Cola ianao
Ny mpampiasa YouTube TechRax dia nametraka ny iPhone 6 tamina andrana iray manokana, nandrahoina azy tao Coca Cola.
Ny 'Aiwatch' dia ny clone sinoa an'ny Apple Watch ary mahatratra 168 ora ny bateria
Ny orinasa sinoa iray dia efa manana ny endriny manokana an'ny Apple Watch. Atorinay anao izany
Apple misaotra ny mpiasany amin'ity taona ity amin'ny kitapom-batsy
Toy ny isan-taona, rehefa vita io dia misaotra ny mpiasany i Apple noho ny asa vita amin'ny antsipiriany vitsivitsy, amin'ity taona ity dia toa kitapom-batsy manokana izy ireo.
Ny kojakoja manintona dia mety hanakorontana ireo iPhone vaovao
Hitan'ny mpampiasa fa misy ny olana amin'ny fakan-tsary iPhone 6 Plus sy NFC amin'ny iPhone 6 sy 6 Plus, ny antony dia mety ny fanelingelenana avy amin'ireo kojakoja andriamby.
Ireto ny fitsapana izay tsy maintsy lalovan'ny Gorilla Glass [video]
Asehonay aminao amin'ny horonan-tsary ireo fitsapana izay tsy maintsy andalovan'ny iPhones vaovao hanehoana ny kalitaony.
Ny fahazoan-dàlana hitondra fiara amin'ny findainao
Ny fanjakan'i Iowa dia miomana hamoaka fahazoan-dàlana nomerika mpamily. Ny fanjakana dia te hanana azy io amin'ny finday, izay hiara-hiaina amin'ny ankehitriny.
Afaka mikaroka ny findainao izao ny polisy kanadiana raha tsy misy taratasy
Nanjary lohahevitra fady tao amin'ny tontolon'ny smartphone ny fiainana manokana. Ankehitriny, misy lalàna vaovao mamela ny polisy kanadiana hikaroka ny findainao tsy misy taratasy.
Hiverina indray ve ny 12 andro fanomezana an'i Apple amin'ity Krismasy ity?
Noho ny tsy fisian'ny Zoma Mainty any amin'ny faritanin'i Eraopa, tsy fantatray raha Apple mikasa ny handefa ny fampiharana "12 andro fanomezana" amin'ity Noely ity
Apple dia mandefa fangatahana fandraharahana voalohany amin'ny IBM
Apple dia nanangana fangatahana fandraharahana miaraka amin'ny IBM, antsoina hoe MobileFirst ho an'ny iOS, Apple manantena ny hanolotra serivisy samihafa ho an'ny orinasa.
Ny tweak ICaughtU Pro dia manampy amin'ny fisamborana mpangalatra iPhone
Ny jailbreak dia zavatra nasehoan'ny Apple tamim-pahatezerana mafy, saingy tamin'ity indray mitoraka ity noho ny fanitsiana, iCaughtU Pro, afaka nahita ilay mpangalatra iPhone izy ireo.
Bill fernandez, mpiasa Apple voalohany miresaka momba ny Asa
Bill Fernandez, mpiasan'ny Apple voalohany, dia nanao tafatafa iray izay niresahany momba ny fiandohan'ny orinasa sy ny fifandraisany amin'i Steve Jobs.
Makà telo volana Spotify Premium amin'ny 0.99 euro
Raha andevozin'ny Spotify ianao, amin'ny fahatongavan'ny Krismasy ity serivisy ity dia manome fahafaha-mahazo Premium Premium mandritra ny telo volana amin'ny 0.99 euro fotsiny.
Spotify dia manome anao 3 volana kaonty Premium amin'ny 0,99 euro
Ny Spotify Premium izao dia mitentina 0,99 euro fotsiny mandritra ny telo volana mba hahafahanao mihaino ny mozika rehetra tianao maimaimpoana ary tsy misy dokam-barotra.
Steve Wozniak dia mampiasa iPhone 6 hiditra amin'ny efitranon'ny hotely misy azy
Nasehon'i Woz fa ny fampiharana SPG, namboarin'ny Starwood Hotels, dia mamela anao hamaha amin'ny fomba majika ny efitranonao amin'ny fampiasana iPhone 6.
Cyber ​​Monday, tolotra bebe kokoa ho an'ny vokatra Apple sy iPhone
Fifampiraharahana Cyber ​​Monday Alatsinainy amin'ny vokatra sy kojakoja Apple ho an'ny iPhone, iPad na Mac. Mividiana mora kokoa amin'ireo varotra manaitra ireo.
Ivo Leko dia mampiseho fomba fifandraisana vaovao amin'ny iPhone
Ivo Leko dia mpamorona iOS, amin'ity horonantsary ity dia asehony fomba vaovao hifandraisana amin'ny iPhone izy.
Misaotra ny tranokala IPSW azontsika atao ny manamarina hoe iza amin'ireo orinasa Apple izay manao sonia amin'ny fotoana rehetra.
Ny chip A8 dia milalao 4K amin'ny iPhone 6 sy iPhone 6 Plus
Hitan'ireo mpandrindra WALTR fa ny filàny dia afaka milalao horonantsary 4K amin'ny iPhone 6, ary izany dia vokatry ny fikirakirana A8 ampidiriny.
Maneso an'i Apple i Microsoft amin'ny alàlan'i Siri sy Cortana
Miverina indray ny dokambarotra fampitahana. Amin'ity tranga ity dia Cortana no manafika an'i Siri noho ny "tsy fahampiana" ananan'ny iPhone amin'ny Microsoft.
IFixt Torolàlana hanamboarana iPhone 6 sy iPhone 6 Plus
Navoaka ny torolàlana iFixt izay manazava tsikelikely ny fomba fanamboarana ny fitaovana iPhone 6 na iPhone 6 Plus amin'ny alàlan'ny sary sy horonan-tsary.
Danalock dia mamela anao hanokatra ny varavaran'ny trano amin'ny alàlan'ny iPhone
Toy izany no fiasan'ny hidin-trano elektronika Danalock
Gorilla Glass 4 dia mampanantena ny hahatanty ny filatsahan'ny isan'andro isan'andro ary hasehony antsika amin'ny horonan-tsary
Lahatsary fanoherana ny Gorilla Glass 4, ny vera vaovao ho an'ny efijery finday sy takelaka izay mampanantena fa mahazaka dia milatsaka nefa tsy tapaka.
Apple dia manampy ny therobat Ecobee3 amin'ny fivarotana an-tserasera
Ao amin'ny lisitra lava an'ny fitaovana Connected Home izay vao nampidirin'i Apple thermostat marani-tsaina vaovao, ny Ecobee3, andao hojerentsika izay entiny.
Zavatra 10 tsy fantatrao momba an'i Tim Cook (ary mety ho tianao ho fantatra)
Ny CEO ankehitriny an'ny Apple dia tsy dia misy ifandraisany amin'i Steve Jobs. Androany dia hitantsika ny tsiambaratelo sasany fantatra momba ny lehiben'ny sakana.
Hanitatra ny fitahirizanao iPad amin'ny SanDisk iXpand
SanDisk dia nametraka fitaovana vaovao mamela antsika hanitatra ny fitehirizana ny iPad
Mpampiasa iray mahavita mametraka Windows 98 amin'ny Iphone 6 Plus
Mpampiasa forum forum sinoa iray dia nahavita nametraka Windows 98 tao amin'ny iPhone 6 Plus, araka ny voalazany fa dingana iray nahitany faharetana be io.
Hamarino raha voan'ny WireLurker ny fitaovanao iOS
Andro vitsy lasa izay dia nivoaka ny vaovao fa nisy malware nanaparitaka fitaovana, miaraka amin'ity fomba ity dia azonao atao ny manamarina fa voa ny fitaovanao iOS.
Apple dia miasa amin'ny iPhone ho avy miaraka amin'ny 3D tsy misy solomaso
Araka ny tatitry ny UDN, Apple dia miasa amin'ny efijery misy teknolojia 3D tsy misy solomaso, izay heverina fa hapetraka amin'ny iPhone ho avy.
Vondron'ireo mpampiasa 6GB iPhones 128 miaina olana mety hitranga amin'ny hardware
6GB iPhones 6 sy iPhones 128 Plus mety hanana olana amin'ny hardware
Nesorina ny sarivongana natokana ho an'i Steve Jobs satria pelaka i Tim Cook
Ny manampahefana rosiana dia nanala tsangambato natokana ho an'i Steve Jobs, ho an'ny fanambarana nataon'ny Tim Cook, izay tale jeneralin'ny Apple ankehitriny, momba ny fironany ara-nofo.
Pangu dia hanavao ny fonosana "Untether" mankany amin'ny version 0.4
Ny ekipa tompon'andraikitra amin'ny famolavolana Pangu8 dia nanamafy ny famoahana ny kinova 0.4 amin'ny fonosana "untether" izay hamaha ny olan'ny Safari
Tamin'ny fanombohana ireo fitaovana Apple vaovao dia nipoitra ilay resabe malaza fantatra amin'ny anarana hoe "Bendgate", toa nalamina angamba i Apple.
Afaka mametraka Cydia avy amin'ny app Pangu (Jailbreak) isika izao
Pangu dia efa mamela anao hametraka ny kinova Cydia mifanaraka amin'ny iOS 8 avy amin'ny fampiharana izay apetraka rehefa jailbreak izahay
Apple dia namoaka ny tatitra isan-taona nataony tamin'ny angona mahaliana nanomboka tamin'ny 2014
Ny Big Apple dia namoaka tao amin'ny tranonkalany ny tatitra isan-taona ho an'ny 2014 miaraka amin'ny angon-drakitra mahaliana momba ny fitantanan'i Apple amin'ity taom-piasana ity
Ny lesoka amin'ny iPhone 6 Plus dia mahatonga azy io hiverina indray
Nisy resabe vaovao ho an'ny iPhone 6, amin'ity tranga ity dia mifantoka amin'ny iPhone 6 Plus izy io, izay antony tsy fantatra dia miteraka hadisoana lehibe.
Avadiho ho lasa fanaraha-maso fiara ny iPhone
Tamin'ny 21 Oktobra dia navotsotra ny patanty Apple iray, izay ahitanao ny fomba ahafahan'ny iPhone mety hampivelatra ny asany amin'ny fiara.
Ny iOS 8.1 dia azo alaina miaraka amin'ny Apple Pay
Apple dia namoaka ny fanavaozana ny lozisialy iOS 8.1 miaraka amin'ny Apple Pay sy ireo fiasa vaovao hafa
Ny efijery IPad Air 2 dia mety miteraka olana
Ny efijery manohitra ny taratry ny iPad Air 2 dia mety hiteraka olana amin'ny famokarana ary ho voafetra ny tahiry
iPad Air 2 sy iPad Mini 3, ireo mpandray anjara fototra amin'ny keynote: amin'ny antsipiriany
Ny iPads no mpandray anjara fototra amin'ity Apple keynote ity hatramin'ny nanolorana ny Air 2 sy ny Mini 3, iza amin'ireo no tianao hividy?
Apple Stores dia mety hanolotra serivisy ho an'ny vokatra Beats
Apple dia mety manolotra serivisy ho an'ny telefaona Beats ary mpandahateny ao amin'ny magazay Apple Stores.
Apple handefa mivantana ny hetsika 16 Oktobra
Apple dia handefa mivantana ny hetsika iPad Air 2 sy iPad Mini 3 hahafantarana amin'ny antsipirihany ny vaovao rehetra momba ny keynote amin'ny 16 Oktobra.
Ahoana ny fametrahana Popcorn Time tsy misy jailbreak
Hitan'izy ireo ny vahaolana hametrahana Popcorn Time amin'ny fitaovana tsy misy jailbreak mampiasa fahalemena izay ampiasain'ny emulator ihany koa
Moviebox, fampiharana mitovy amin'ny PopCorn Time fa tsy mila jailbreak
Misaotra an'i Moviebox afaka mankafy sarimihetsika mivantana sy andian-tsarimihetsika avy amin'ny fitaovantsika izahay, saingy tsy ilaina ny manana jailbreak
Manomboka mivarotra kojakoja mifanaraka amin'ny CarPlay i Pioneer ary misoratra anarana ho fampiharana mifanentana i Spotify
Pioneer dia manavao modely maro amin'ny radio mba hampifanaraka azy ireo amin'ny CarPlay, ny haitao Apple izay mampiditra ny iOS ao anaty fiara.
Apple dia namoaka ny iOS 8.0.2 (ary izao dia mandeha)
Azo alaina izao, amin'ny alàlan'ny OTA, iOS 8.0.2 hisintomana
Topin-tsarimihetsika 25 iOS 8 ambony (II)
Amin'ity ampahany faharoa amin'ny lahatsoratra ity dia mamakafaka ireo ambiny amin'ireo asa tsara indrindra an'ny iOS 8 izahay, ny rafitra fiasa vaovao an'ny paoma lehibe ho an'ny iDevices anao
Top 25 iOS 8 endri-javatra (I)
Amin'ny iOS 8 eo am-pelatanantsika dia efa afaka miresaka momba ireo fiasa 25 tsara indrindra amin'ity rafitra fiasa ity isika
AT&T dia mandefa tolotra mahaliana hanamora ny fividianana ny iPhone 6 anao
Drafitry ny tolotra ataon'ny mpandraharaha AT&T hahatonga ny fividianana ny iPhone 6 ho mora vidy kokoa
Ny sarany izay aloakan'ny Apple amin'ny Apple Pay
Ny rafitry ny fandoavam-bola vaovao an'ny Apple dia mampanantena fa ho orinasa tena mahasoa ho an'ny orinasa. Androany izahay dia mamakafaka ireo kaomisiona izay andoavanao vola amin'ny fampiasana azy.
Ny zava-dehibe indrindra tokony ho fantatrao momba ny Apple Watch
Ireto no zavatra 9 tokony ho fantatrao momba ny fitaovana vaovaon'i Apple, ny Apple Watch
Sintomy ny rakitsary U2's of Innocence maimaim-poana
Ahoana ny fomba fampidinana maimaim-poana ny rakipeo Songs of Innocence an'i U2, rakikira farany an'ny vondrona izay azo azo maimaim-poana amin'ny alàlan'ny iTunes.
Ny chip A8 an'ny iPhone 6 dia mampiditra ny coptereur M8 miaraka amin'ny vaovao mahafinaritra
Ny chip A8 dia miaraka amin'ny coprocessor an'ny hetsika M8 vaovao izay misy ny fitehirizana ny halaviran-dàlana sy ny barometatra.
Manidina amin'ny campus vaovao an'i Apple
Drôna voafehy lavitra no nanidina tao amin'ilay campus manaraka an'i Apple, voalahatra ho vita amin'ny 2016.
Fitsapana fanoherana eo anelanelan'ny vera Safira sy Gorilla Glass
Ireo tovolahy ao uBreakiFix dia nanao fitsapana fanoherana teo anelanelan'ny vera Safira sy ny Gorilla Glass. Atorinay anao izay mahatohitra kokoa.
Silver dia mamela anao hampiasa Swift hampivelatra fampiharana amin'ny Android sy Windows Phone
Ny fanolorana ny fiteny ho an'ny fampiharana amin'ny iOS dia misy valiny amin'ny antoko fahatelo. Tonga ny volafotsy mamela anao hampiasa Swift hampivelatra fampiharana amin'ny Android sy Windows Phone.
Safira vs Gorilla Glass: horonan-tsary misy ny fampitahana azy roa
Raha ny fampahalalana mifanohitra momba ny hamafin'ny fitaovana roa dia mandeha amin'ny alàlan'ny tambajotra, hitantsika mifanatrika mivantana ny safira sy Gorilla Glass.
T-mobile any Etazonia dia manolotra vidiny mihena ho an'ny iPhone 5s sy iPhone 5c